Momba anay - Suzhou Hanrui Electric Co., Ltd.
Ny Suzhou Hanrui Electric Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny faritanin'i Jiangsu, tanànan'ny rano mahafinaritra any atsimon'ny renirano Yangtze, voahodidin'i Shanghai, Nanjing, Suzhou Xichang ary faritra an-tanàn-dehibe hafa, miaraka amin'ny fepetra ambony sy fitaterana mety. Ny foibem-pamokarana dia miorina ao amin'ny Tanànan'i Jinfeng, Zhangjiagang City, firenena indostrian'ny metalurgique, No. 48, lalana Huarun.
Ny orinasa dia andiana fampandrosoana sy famokarana rafitra automation indostrialy, fampivoarana vokatra automatique tsy standard, famokarana, varotra ary serivisy ho iray amin'ireo orinasa teknika.
Ny orinasa dia mandray ny làlana siantifika mandroso miaraka amin'ny fitantanana henjana, miezaka ho tonga lafatra ary miezaka mamorona marika tsara kokoa. Izy io dia manaraka ny fitsipiky ny kalitao voalohany, ny lazany voalohany ary ny foto-kevitry ny orinasa. Miezaka mafy manome ny vokatra tsara indrindra sy serivisy tonga lafatra ho an'ireo mpanamboatra fitantanana ary mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa sy orinasa.
Tongasoa ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany mba hiara-hidinika, hiara-hiasa hamorona famirapiratana.